Abadlali abali-11 ababalaseleyo bomculo Windows 10 | Iindaba zeGajethi
Ngaphandle kwento yokuba iinkonzo zokusasaza umculo zisisixhobo esisetyenziswa kakhulu ngabasebenzisi abaninzi xa kufikwa ekuphulaphuleni umculo abawuthandayo, uninzi lwabo banenani elikhulu leengoma, iguqulwe ngokuthe ngqo kwiCD yakho kumgangatho ophezulu kwaye bakhetha ukusebenzisa iPC yabo ukuyilawula ngalo lonke ixesha, ukongeza ekuyidlaleni kwayo kunxibelelene nezixhobo zesandi.
Ukuba ufuna ukuqhubeka nokusebenzisa ilayibrari yakho yomculo, loo thala leencwadi lomculo likuchithe iminyaka emininzi ukuyenza, kweli nqaku siza kukubonisa ukuba ziyintoni Abadlali bomculo abaphambili beWindows, Abadlali abaqhubeka nokuhlaziya minyaka le, hayi abo baye baba lilivo kodwa abangakhange bahlaziyeke iminyaka eliqela.
Kubo bonke abadlali esikubonisa apha ngezantsi, bonke Basinika iinguqulelo zasimahla kunye neminye imida, umda esinokuthi sitsibe ngokuthenga usetyenziso, kodwa zincinci. Ngoku yonke into ixhomekeke kwiimfuno kunye nokukhethwa kufuneka ugcine ithala leencwadi lakho ngokulandelelana kunye nekhonsathi.
1 Umdlali weGom
2 Umphathi woMculo weWaf
10 VLC umdlali weendaba
Lo mdlali usebenzisa izixhobo ezimbalwa kakhulu, akasivumeli ukuba sonwabele umculo wethu esiwuthandayo, kodwa usivumela ukuba sidlale naluphi na uhlobo lwevidiyo, kubandakanya nerekhodwe kwiidigri ezingama-360, nangona oku kufuneka Kuya kufuneka ukhuphele iikhowudi ezihambelanayo, into engenzekiyo ukuba sithetha ngeefayile zomculo. Umdlali we-GOM usinika inani elikhulu lezikhumba ukwenza ukuba umdlali wethu ahambelane nezinto esizithandayo, umsebenzi ongengabo bonke abadlali kwintengiso.
Ukuba ngelixa umamele umculo sihamba sijikeleza indlu, enkosi kwisicelo esikude se-GOM, sinako lawula ukudlala kwakhona kwi-smartphone yethu, nokuba yi-Android okanye i-iOS, ukuze sikwazi ukumisa ukudlala, ukuqhubela phambili ingoma, ukubuyela umva ... Ifuna i-2 GM yememori ye-RAM kwaye iyahambelana kwiWindows XP ukuya kwiWindows 10. Ikwasinika inani elikhulu lezikhumba ukuze sizenzele ubuhle bomdlali.
Khuphela iGOM Player
Umphathi woMculo weWaf
Umphathi woMculo weWaf sisicelo esilula nesisebenzayo esenza amaqela a Isidlali somculo, umququzeleli wengoma kunye nomhleli wethegis kwiphakheji enye engasindi, ekuvumela ukuba umamele umculo kwaye utshintshe iinkcukacha zomculo endaweni enye. Isikhangeli sefayile esakhelweyo sikuvumela ukuba ujonge zonke iifayile zomculo ezixhaswayo kwindawo ethile kwikhompyuter yakho kunye nexesha lazo, ngelixa umsebenzi wokukhangela ungasetyenziselwa ukucoca iingoma ngegama lomculi, isihloko okanye ialbham.
Isicelo sikuvumela ukuba uhlele idatha yeethegi yeefayile zomculo ezikhethiweyo (imisebenzi yebhetshi iyavunyelwa), inika indawo ehlekayo yegama lomculi, isihloko sengoma, ialbham, ukulinganisa, inombolo yenombolo, unyaka, uhlobo, umshicileli, abaqambi kunye abalawuli. Ngale ndlela, unokucwangcisa ingqokelela yakho ngendlela efanelekileyo ngakumbi. Umphathi woMculo weWal uxhaswa njengeWindows 8.1.
Khuphela umphathi weWaf Music
I-ZPlayer sisidlali somculo esisekwe kwiJava esivumela ukuba sonwabele umculo esiwuthandayo kunye nesisebenzisi ekulula ukusisebenzisa ngaphandle kwengxaki. Lo mdlali uxhasa ngokwendalo uluhlu olubanzi lweefomathi zeaudiyo ezinje ngeMP2, MP3, WAV, Ogg, Flac, MID, CDA, MOD, Dolby AC3 ... Sinokwenza ngokulula uluhlu lokudlala olusibonisa igama lengoma, ubude, ubungakanani kwaye yadalwa nini. UZPlayer ngumdlali ohambelana nazo zonke iinguqulelo zeWindowsIsivumela ukuba sidlale iaudiyo, ihlala incinci kakhulu kwaye ujongano lomsebenzisi lusivumela ukuba sime kancinci okanye sidlale ingoma, simise, siqhubele phambili ingoma okanye sibuyele kule yangaphambili.
I-AIMP ijoyina uluhlu olude lwabadlali bomculo abafumanekayo kwiWindows. Olona phawu lubalulekileyo lusinika kukuhambelana nezikhumba ezahlukileyo ukwenza ukuba umdlali abe nezinto esizithandayo. I-AIMP iyahambelana ngokwendalo ne-MP3, AAC, FLAC, MAC, M3U, OGG, OPUS, RMI, TTA, WAV kunye neefayile zeWMA phakathi kwezinye. Lo mdlali ithatha indawo encinci kwi-hard drive yethu kwaye iyahambelana njengeWindows Vista.
IMusicBee ngomnye wabadlali osinika ukhetho oluninzi kwindawo encinci. Endaweni yokusinika isikhangeli sefayile, kufuneka singenise ngokuthe ngqo ifolda apho kukho khona iifayile zomculo ukuqala ukudlala kwakhona. Ukuba phakathi kweemethadatha zeefayile yeaudiyo, ialbhamu okanye ingoma yobugcisa ifakiwe, oku kuya kubonakala kwisicelo. IMusicBee isinika iindlela ezahlukeneyo zokubonisa, ukucima ngokuzenzekelayo, ukutshintsha ubumbeko lomsindo, ukufikelela kumxube wengoma, ukuguqula iilebhile zeefayile ezimanyelwayo ... Oku kudlala kuyahambelana kwiWindows Vista kwaye iyahambelana neenguqu ezingama-64.
Omnye wabadlali abasinika inani elikhulu lokukhetha yiMediaMonkey, ukudlala kwakhona okunokulawula ithala leencwadi ngaphandle kokuphazamisa iifayile ezingaphezu kwe-100.000, ukutshisa iiCD ngokuthe ngqo kwisicelo, khangela kwiithegi, iileta, amaqweqwe kunye nezinye iimethadatha, lawula uhlobo lweengoma ...
Ikwasivumela ukuba sidlale nayiphi na ifomathi yeaudio ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuguqukela kwezinye iifomathi, sinokwenza uluhlu lwadlalwayo lwazo zonke iingoma esizifunayo ngaphandle kwemida ukongeza ekusebenziseni Umsebenzi we-Auto DJ ukuze uzenzele unonophelo lokudlala iingoma ezivela kwilayibrari yethu. Ngaphakathi kokukhetha ngokwezifiso sikwafumana ithuba lokongeza ulusu, izixhobo zokufumana umculo omtsha, iipakethe zolwimi ...
Nangona esi sicelo saziwa ngcono ngokuba ngumhleli obalaseleyo weefayile ezimanyelwayo, sikwasinika imisebenzi eyahlukeneyo yokuyisebenzisa njengomdlali womculo, kodwa ngaphezulu kusivumela ukuba sihlele iingoma zethu esizithandayo ukuba sizenze, ngokufiphala, a ithrekhi enye eneengoma ezininzi. Naps ujonge zonke zibe nyeUkuthintela ukuba nezicelo ezininzi ezifakwe kwikhompyuter yakho, ukuphicothwa kwesicelo osifunayo.
Ukuba umculo wethu awufumaneki kuphela kwi-PC yethu, kodwa sikwasebenzisa nesevisi yomculo yokusasaza, ukulawula lonke olo lwazi kulula kakhulu ngeTomahawk, umdlali wasimahla ungaqhagamshelwa kuGoogle Play Music, Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud ukuya kwiYouTube. Ngale ndlela, nayiphi na ingoma esiyifunayo, siya kuyifumana ngokulula, nokuba kwihard drive yethu okanye kwenye yezi nkonzo zomculo zisasazayo. Kwakhona, ukuba singomnye wabo basebenzisi abathanda ukwabelana ngezinto esizithandayo nabahlobo bethu, iTomahawk isinika izixhobo ezifanelekileyo zokwenza njalo.
I-iTunes, ephefumlelwe yi-Apple's iTunes, isinika ujongano olulula nolucacileyo ukuze sikwazi ukufumana ngokulula kwaye sidlale zonke iingoma eziyinxalenye yelayibrari yethu. Enkosi kukhetho lokungenisa iingoma okanye izikhombisi, sinokulawula ithala leencwadi lethu kancinci kancinci ngaphandle kokulwa nenani elikhulu leengoma ngokukhawuleza xa siqala.
I-iTunes iyahambelana nazo zonke iifomathi zomsindo kwintengiso, ke asizukufuna ukuguqula iingoma kwifomathi ehambelana ngakumbi ukuze sikwazi ukuzidlala, kunye nesicelo esihle sasimahla. Njengezinye iinkonzo, i-iTunes iyasivumela ukuba sinxibelelane ne-Last.fm ukongeza ekufumaneni zonke iingoma eziphindiweyo, into ethi yenziwe zizicelo ezimbalwa kakhulu.
VLC umdlali weendaba
I-VLC iye, ekuhambeni kweminyaka, esona sixhobo silungileyo esinokuthi sisifumane ngoku kwintengiso yasimahla ukuze sikwazi ukumamela umculo wethu owuthandayo kwaye sonwabele nayiphi na ividiyo nakweyiphi na ifomathi, kuba iyahambelana nayo yonke. Nangona kuyinyani ukuba i-aesthetics ayingoyena uqhankqalazayo, ngeVLC asizukuba nangxaki dlala nayiphi na ifomathi yomculo.
Ukuba sifuna ukuba ilayibrari yethu ihlale ilandelelana kunye nezikhuselo zazo, iApple iTunes lukhetho oluhle xa umamele umculo wethu owuthandayo, ewe, kufuneka ucokeke kakhulu kuyo yonke idatha yengoma nganye, ukuze isicelo sikwazi ukuhlengahlengisa amaqela ngendlela eyiyo. Ukuba unayo i-iPhone, i-iPad okanye i-iPod Touch, kunokwenzeka ukuba sele unayo le sicelo uyifakileyo nokuba uyisebenzisa kuphela ukwenza iikopi ezikhuselayo, kuba umsebenzi owawusivumela ukuba sihambe ngeVenkile ye App kwaye siyifake kamva kwisixhobo sethu se-iOS sisusiwe emva kokukhutshwa kwe-iOS 11.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Abadlali bomculo abaphambili beWindows
INintendo ukuvala Ivenkile yeWii ngo-2019
Umfanekiso wento enokuba lilori yombane kaTesla ipapashiwe